Sir Culus :- Codsi La Yaableh Oo Ay Xulalka Koobka Aduunka Ciyaarayaa Brazil U Gudbiyeen
HomeWararka MaantaSir Culus :- Codsi La Yaableh Oo Ay Xulalka Koobka Aduunka Ciyaarayaa Brazil U Gudbiyeen
Wargeyska ka soo baxa wadanka Brazil ee Lance ayaa hellay nuqulada waraaqo codsiyo ah oo ay wadamada ka qayb gallaya koobka Aduunku codsiyo ugu gudbinayaan wadanka Martigalinaya ee Brazil , kagana codsanayaan in sidaas oo loo sameeyo mooyaane aanay ciyaaraha ka qayb galli karin.
Codsiyadan ayaa qaar kamid ahi yihiin kuwo iska caadi ah, halka ay ku jiraan kuwo qosolka kaa dhamaynaya oo aan loo baahnayn in lagu xidho dhacdo sida tan koobka aduunka oo kale ah.
Hadaba waa kuwan Codsiyadii ee Nala Dheeho :-
” Chile: Ayaa waxay codsanaysaa in sariiro cusub iyo Shaashadaha baladhka u samaysan (flat Screen Tvs ) qol kasta loogu qalabeeyo.
Ecuador: Waa in qol kasta ay taalaa salad muus ka buuxo , muuskaas oo ah kan uu dhoofiyo wadanka Ecuador.
Colombia: Ayaa waxay ka codsatay Dawlada Sao Paulo in 15 dhalinyarada wadankaasi ahi ay qayb ka noqdaan xulka qarankooda wakhtiyada ay tababarka ku jiraan.
Uruguay: Qaranka koonfurta Maraykanku waxay codsanayaan qaboojiyeyaasha aan sanqadha ‘codka lahayn ‘ loogu rakibo qol kasta.
France: Xulka Les Bleus wuxuu codsaday hilibka xalaasha ah maadaama badi ciyaaryahanadodu muslim yihiin oo uu xaaraan ka yahay hilibka xayawaanka aan sida sharciga Islaamku qabo loo birayn (Qalin) . France waxa kale oo ay codsadeen saabuunta dareeraha ah in musqul kasta (bathrooms) loo dhigo maadaama aanay ciyaaryahanadoodu ku maydhan saabuunta adag.
Honduras: Ayaa codsaday in loo dhigo qol kasta Tv-yo Lix channel oo luqada Spanish-ka ku baxaya ku jiraan, iyo Laba channel oo kuwa wadanka Hunduras ah.
Japan: Xulka lagu naanayso Blue Samurai iyagu waxay codsadeen baraakaha maydhiga ee loo yaqaano ‘jacuzzi’ oo ah marmar ama sibidh qurux badan oo sida barkada u samaysan oo ku filan hal qof si raaxo leh uu ugu dhex maydhan karo isagoo jiifa- in qol kastaa leeyahay!
Australia: Waxay iyagu codsadeen in loo diyaariyo subax kasta nuqulo joornaalada dunida ka soo baxa ah oo maalinle loogu diyaariyo qof kasta.
Switzerland: Waxay codsatay laba arimood oo waaweyn—ta koowaad : Internert xawaare sare leh ‘high-speed internet’ iyo Channelada Tv yada Swisserland qol kasta loo dhigo.
Portugal: Waxay codsadeen Lix shaqaalaha amaanka ah ‘boodhigaadh ‘ilaaliye’ . oo afar kamid ahi ay si khaas ah amnigiisa u sugaan Cristiano Ronaldo. “
Totti, Ashley Cole Iyo Xidigaha Roma Oo Ciyaar Tennis Ah Kala Qayb Gallay Novak Djokovic & Caroline Wozniacki